Email Kushambadzira Ongororo yeZororo
Muvhuro, Nyamavhuvhu 20, 2012 Mugovera, October 25, 2014 Lavon Tembere
Yadonha zvinoreva kudzoka kuchikoro kunotenga kuri kuzara uye vadzidzi vari munzira kudzokera kukirasi. Zvisinei,
Nguva. Ziva kuti kunyangwe iri Nyamavhuvhu chete, vanhu vakati wandei vatotanga kutarisa mune zvipo zvipo. Kana vakaiwana nemutengo wakakodzera, ivo vanoenda kumberi uye vanotenga kuti vave pamberi pemutambo. Isa maemail ako kune vateereri uye emaimeri emaemaini kuti utore vatengi vacho. Ehezve, mamwe emazuva makuru iwe aunoda kugadzirira ndeaya Black Chishanu uye Cyber ​​Muvhuro, asi iwe unofanirwa kupa kukosha kune vako vanyori mukati menguva yezororo.
Mahoridhe Matemplate. Pakati pezororo ndeimwe yenguva zhinji vatengesi veemail vanogona kubuda mubhokisi uye kuwedzera zororo shoma kumafirita avo. Iyo yekuwedzera yekugadzira inogona kukurudzira vanyoreri kuti vapfuure nekutenga.
Madhiri uye Akakosha. Tumira zviyeuchidzo kune vako vanonyoresa sezvo mazororo anotanga kuswedera padyo nekushomeka. Sanganisira coupon kana specials ezvipo zvinogoneka nhengo dzemhuri, shamwari, uye kunyangwe vadzidzisi vevana. Vanyoreri vanozoonga kuti iwe wavaitira basa uye wavapa mamwe mazano.
Vadivelu Comedy Mobile. Paive nechikuru chakakura muhuwandu hwevanhu vari kutenga kuburikidza nharembozha yavo pazororo gore rino. Mwaka uno, ti zvakakosha kuti saiti yako yakagadziridzwa kune nhare. Iwe unoda kuve nechokwadi kuti zviri nyore kune vanyoreri kufamba uye kushandisa. Kana zvisiri, ivo vanozosiya votsvaga mukwikwidzi wekutenga kubva panzvimbo.
Wana Zvemagariro. Ndinovimba wave kuto sanganisira hukama hwehukama mumaemail ako. Nekudaro, kutenderedza mazororo, zvakatonyanya kukosha kuti uwedzere izvi uye uzviratidze! Pinterest yakabvisa chaizvo gore rino uye vanhu vazhinji vakanamatira kwariri. Kana kambani yako iine huvepo ipapo, iwe ungangoda kuendesa vanyori kune yako mbiri kuti vaone zvigadzirwa zvinoonekwa uye kuti vatenge.
Aya angori mashoma emazano ekutanga kuita mune yako yezororo kuronga email. Ndeapi mamwe matipi awakanzwa nezvazvo uye uri kufunga kuwedzera kune ako ezororo email macampaign?
Tags: zveefazororozororo yekutarisaYeMahara neThebhu KushambadziraSocial Media Marketingspecialstemplatesnguva
Klout Zvikoro Zvakagadzirwazve… uye ndinozvida!
Aug 20, 2012 pa 10: 14 AM
Uh-oh… yatova nguva yekutanga kuronga? 🙂